Global Voices teny Malagasy » Sina: Ady mafy vao mba tafody hihaona amin’ny fianakaviana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Febroary 2009 18:01 GMT 1	 · Mpanoratra Bob Chen Nandika avylavitra
Sokajy: Shina, Fampandrosoana, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna, Tsidika
Dia lavitr'ezaka no mialoha ny Lanonamben'ny Lohataona  fety malaza ho an'ny rehetra, Raha ny mahazatra hatrizay dia andro vitsy mialohan'ny fiandrasana ny Taombaovao Sinoa izy io no manomboka. Ary rehefa tonga indray ny fotoana hifandaozan'izy ireo amin'ny fianakaviany, dia tapitra eo koa ilay fialantsasatra fohy fa dia lavitr'ezaka hafa indray no hitondra ho any an-tany lavitra ny tanànany any.
Ny Dia lavitra rehefa Lanonamben'ny Lohataona , na Chunyun, no tena lehibe indrindra raha resaka fivezivezen'olona isan-taona ary ahitàna hatrany amin'ny mpandeha 2 lavitrisa  isan-taona, anatin'ny fotoana fohy tsy mihoatra ny 40 andro akory. Tamin'ity taona ity ny Taombaovao dia ny faha 26 Janoary. 15 andro talohan'io no efa niainga ny Chunyun; androany, 31 Janoary, manomboka kosa ny dia be fodiana.
Fifamoivoizana mampivanaka, miaraka amin'ireto vahoaka marobe mihaohao eraky ny toby fiantsonan'ny fiaran-dàlamby, fiantsonan'ny fiaramanidina, na taxi-brousse, no entin”ny [ateraky ny] fandalàna fatratra ilay lanonambe, izay tsy hafa fa fihaonamben'ny fianakaviana ihany koa.
Ny fanitarana ny tanàn-dehibe haingam-pandeha loatra nefa mikorontana koa indraindray tao Sina dia nanome teorana ny dikan'ity “fivoriam-pianankaviana” ity. Mpiasa 200 tapitrisa  avy any amin'ireo faritra ambanivohitra no miasa any an-tanàn-dehibe ary mamela ny fianakaviany manontolo any aoriany mba hahafahana miaina tsaratsara kokoa. Ny fetin'ny lohataona, ho an'ny maro amin'izy ireo, no hany fomba hihaonany amin'ny fianakaviany indray noho ny halafon'ny fodiana an-trano.
Iray amin'ireo vokatr'izany ihany koa ilay fahasarotan'ny fodiana an-trano. Tsy maharaka ny habetsahan'ny fangatahana ny fitaterana. Amin'ny lafiny iray, ny zotra an-dalamby, izay ampihi-mamba sy ambany vahohon'ny fanjakana dia tratry ny fanakianana mivaivay foana isan-taona. Noho ny habetsahan'ny fangatahana sy ny famerana ny vidiny, miroborobo ny fanararaotana. Mandritra izany, ny mpiasa ao amin'ny birao fanaovana famandrihan-toerana no eritreretin'ny maro ho mpiray tsikombakomba amin'ny mpivarotra tapakila an-tsokosoko mba hampisondrotana ny vidin'ny tapakila. Raha asiana fanadihadiana dia sahiko ilokana fa io asa io no tsy lanin'ny vavonin'ny olona indrindra any Sina.
Tany Beijing, mpivarotra tapakila iray, namoaka tapakila avy amin'ny milina nefa tsy nivarotra izany tamin'ny mpandeha, fa nampirina izany, na teo aza ny laharan'olona lava be niandry teo, nisy naka horonan-tsary an-tsokosoko tamin'ny finday, ary tsy ela taorian'izay dia efa nipariaka tamin'ny aterineto izany . Ahian'ny olona ho natokana ho an'ny mpivarotra an-tsokosoko ireny tapakila ireny. Olona an'arivony, tanaty fientanana lehibe ho fanehoana firaisan-kina, no niara-nanameloka io mpiasa io.
楚天阁 any Tianya  dia miteny:
Jereo ny ampahan-tsary, ary avy eo dia eritrereto ny amin'ireo olona niandry hatry ny ela teo ireo tanaty rivotra mangatsiaka, ho ana tapakila iray fotsiny. Fa lasa aiza ny fahatsiarovan-tenan'ilay mpiasa (guichet No.37 , gare de Beijing)?
Tandindon'ny fomba fiasan'ny vondrona iray manontolo ihany ny an'ilay mpiasa, ny Minisiteran'ny lalamby , izay mitantana ny lalamby rehetra manerana an'i Sina, antsoin'ny olona hoe “Zokiben'ny lalamby.” Ilay mpitoraka blaogy Zhu Weidong dia manao fanamarihana  amin'ny maha-kidaladala ny ampihimamba amin'ny lalamby, izay heveriny fa resaka saro-takarina:
Tsy niova mihitsy ny ampihimamba amin'ny lalamby nandritry ny taona maro.
Na izany aza, hitondra tombon-tsoa sy tolotra manara-penitra ve ny ampihimamba?
Ny zava-mitranga dia maneho ny mifanohitra amin'izany. Ny seha-pihariana lalamby dia tao anatin'ny mena foana. Ka ahoana ny resaka tolotra? Mbola ratsy lavitra noho ny biraon'ny governemanta, izay mbola sarotra idirana, sarotra ahazoan-javatra, ary matetika mandray anao amina fomba mangatsiaka.
Lahatsoratra iray notanisain'ny haino aman-jery ofisialy Xinhua, mitondra ny lohateny hoe “ny olan'ny famatsiana tapakila dia mahalaza betsaka momba ny fanitàrana ny tanan-dehibe “, no nandalina sy nanipika ny anton'ny fahasarotan'ny fiverenana mody. Raha ny fijerin'i Den Yu-wen, mpitoraka blaogy, dia tsy tsara toy ny fanaovana ny tanàn-dehibe ho toeram-ponenana sahaza ireo mpiasa nafindra toerana ny fanatsaràna ny fitaterana.
……Amin'ny lafiny hafa dia tokony avelantsika any amin'izay toerana hiasany any mpiasa nafindra toerana. Mba hanatanterahana izany dia tokony hapetratsika miaraka aminy any an-tanàn-dehibe ny fianakaviany.
Noho ny olana maro atrehan'ny mpiasa nifindra toerana, tafiditra amin'izany ny fampiantranoana, ny fandriam-pahalemana sy ny fanabeazana ho an'ny ankizy, tsy afaka mandray ny tanàn-dehibe ho toy ny tena fonenany izy ireo, ary tsy afaka miditra ao anatin'ny fiaraha-monin'ny tanàn-dehibe ihany koa. Ka mivezivezy eo foana izy isan-taona, toy ny vorona mandalo.
Ny ekena amin'izao aloha dia tsy mitovy ny fandriam-pahalemana ho an'ny mpiasa nifindra monina sy ny mponina an-tanàn-dehibe. Tsy loharanon-karena velively ho azy ireo ny tanàn-dehibe, fa izy ireo aza no loharanon-kery trandrahana amin'ny vidiny mora ho an'ny tanàn-dehibe.
Ankilan'ny fanavakavahana ataon'ireo sampan-draharaha amin'ireo mpiasa mpifindra monina ireo dia manamarika ihany koa ny mpanoratra:
Zavatra natao an-jambany sy tsy mitera-bokatra ny fanitarana tanan-dehibe nataontsika. Maro amin'ireo mpiandraikitra tanàn-dehibe no tsy mikasa afa-tsy ny hampiditra herin-tsandry azo karamaina mora, fa tsy mieritreritra akory ny olana aterak'izany. Amin'izay lafiny izay, ny fetin'ny lohataona ankehitriny dia fitaratry ny tsy firindràn'ny fivoarana isam-paritra, ary indrindra fa ny fitarazohan'ny tena fanitarana tanàn-dehibe.
Ilay mpitoraka blaogy Willings (驿动的心) dia manoratra lahatsoratra manohina  ary mamintina hoe, “Rehefa takatrao ny Sina ankehitriny dia fantatrao ny Chunyun ( ny dia lavitr'ezaky ny lohataona ).”
Ireo izay efa nandeha tamin'ny fiaran-dalamby mandeha lavitra ihany, efa nandeha tamin'ny Dian'ny Lohataona, ireo ihany no mahafantatra an'i Sina, ary afaka misaina sahala amin'ny tena Sinoa. Mandritry ny Dia lavitr'ezaky ny Lohataona no tena ahatarafana mazava tsara ny fisavoritahan'ny Sinoa.
Safidy A: tsy misy tapakila
Safidy B: tapakila lafo vidy
Safidy C: tapakila hosoka
ary D: Aza mody
Ao anatin'i Sina ankehitriny, na ny mahantra aza dia mifanambaka. Tsy mahatsapa ny tenany ho meloka ny mpivarotra tapakila an-tsokosoko amin'ny tombontsoa malotony, manisa amim-pahafam-po ny volany ny mpangalatra, mitrandraka tsy misy indra fo an'ireo mpikarama, mamela azy ireo hifotetaka sy hidradradradra amin'ny tany eo . Ao anatin'i Sina ankehitriny, naka ny toeran'ny anatry ny oha-pitenenana fahiny ny fitadiavana zana-bola. Very finoana ny olona, afa-tsy ny amin'ny vola.
Eny amin'ny toeram-piantsonan'ny fiaran-dalamby, olona an'arivony no miandry am-pitaintainana ny fodiana an-trano. Miandry andro aman'alina izy ireo, matory amin'ny tany, mijanona eny, na dia ao anatina hanoanana aza. Lava tokoa ny laharan'ny olona ain'izany. Sino tambanivohitra ireo. Tsy maniry afa-tsy ny mba hody any aminy, saingy tsy misy iray akory mba manampy azy ireo. Noho izy ireo tsy afaka mividy tapakilana fiaramanidina, dia tsy maintsy mandeha mifatratra toy ny vitsika.
Ny fiaran-dalamby feno dia ahitana olona amin'ny toerana rehetra, hatreny an-dàlantsara. Lasa manempotra ny rivotra, ary maloto ny toeram-pivoahana. Nefa dia efa iainana andavan'andro izany amin'ny Dia lavitr'ezaky ny Lohataona, tsy misy tokony hitarainantsika……
Afaka manao Gala goavana ho an'ny Fetin'ny Lohataona isika, afaka manana lalao Olaimpika goavana, nefa toa tsy hanan-jo velively amin'ny fananana Dia lavitr'ezaky ny Lohataona mihitsy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/11/1544/
 Lanonamben'ny Lohataona: http://www.chinavoc.com/festivals/spring/springfestival.htm
 Dia lavitra rehefa Lanonamben'ny Lohataona: http://en.wikipedia.org/wiki/Chunyun
 mpandeha 2 lavitrisa: http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_20060128/ai_n16038008
 Mpiasa 200 tapitrisa: http://en.wikipedia.org/wiki/Migrant_worker#China
 nisy naka horonan-tsary an-tsokosoko tamin'ny finday, ary tsy ela taorian'izay dia efa nipariaka tamin'ny aterineto izany: http://news.163.com/09/0113/03/4VGOEVLF0001124J.html
 Minisiteran'ny lalamby: http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Railways_of_the_People%27s_Republic_of_China
 dia manao fanamarihana: http://zhuhd.blog.hexun.com/4636955_d.html
 ny olan'ny famatsiana tapakila dia mahalaza betsaka momba ny fanitàrana ny tanan-dehibe: http://news.xinhuanet.com/comments/2009-01/08/content_10624077.htm
 manoratra lahatsoratra manohina: http://bloooooooogger.blogspot.com/2009/01/blog-post_4961.html